Brook Daily: Mitadiava ireo bitsika mahaliana indrindra | Martech Zone
Brook Daily: Mitadiava ireo bitsika mahaliana indrindra
Alarobia, Martsa 19, 2014 Douglas Karr
Na dia manaraka kaonty marobe ao amin'ny Twitter aza aho dia tsy tena izy manaraka ny kaonty. Twitter dia renirano iray izay tsy maintsy jereko isan'andro raha te-haka ny vaovao rehetra tadiaviko aho. Na dia tiako aza ny Twitter ary loharano tsy mampino izany, tena manampy tokoa ny fikarohana fitaovana mamela anao hitahiry ny atiny.
Brook dia mamela anao hamorona sokajy ary avy eo manaraka ny kaonty Twitter ao anatin'ireo sokajy ireo. Araka ny hitanao eto ambany dia nitady aho Analytics, nisoratra anarana tamin'ireo olona tiako ho harahina, ary avy eo dia nanendry azy ireo ho an'ny sokajy Analytics.
Amin'ny maha-olona tsy mijery ny Twitter azy tontolo andro, ity dia ho fanampin-javatra tsy lafo vidy amin'ny fitaovana ampiasako hitantanana ny riandroko Twitter ary hahazoana ny vaovao izay miakatra ambony!
Tags: lohasahan-driakarenirano isan'androcurationTwitter
Ny fivarotana amin'ny atiny dia tsy amidy amin'ny atiny